China Charmlite 2020 NEW Natural Cork kọfị Mug na Lid Reusable na Biodegradable Ihe onwunwe 16oz na ndị na-eweta ya | Charmlite
Charmlite 2020 NEW Natural Cork kọfị Mug na Lid Reusable na Ihe biodegradable 16oz
Kọfị Mịko na-enwe obi ụtọ - iko ọ bụla mejupụtara plastik polypropylene nri nri (n'ime) na nkuku eke (n'èzí). Iko kọfị a eji emegharị emegharị ma na-adịgide adịgide ga-ejere gị ozi ogologo oge. Iko a nwere ike dochie iko kọfị eji eme ihe na-enweghị ike iweghachite otu kọfị na-emebi ụwa.
Mkpochapu ahihia nke Cork - Cork bu ihe omimi nke amara amara maka ihe mkpuchi ya. O nwere ogologo akụkọ banyere otu narị otu narị eji; anyị ahụwo kwa otu ọzọ! Ọ ga - eme ka ihe ọ yourụ yourụ gị dị ọkụ ma nye gị iko dị gị mma.
100% Igwe anaghị egbochi mmiri - Iko a bụ ihe anaghị egbochi mmiri ma echee ya ihu igwe niile; tinyere mpaghara iru mmiri dị elu. O nwere akwa mkpuchi akwa nwere njiri mara nke ga - enyere aka gbochie mmiri ojoo na ịillsụ mmiri ọ hotụ hotụ.
Nchedo Gburugburu Ebe Obibi - Ejiri ya na ojiji na ojiji. Anyị chọrọ imepụta igwe ihe ọ travelụ hotụ na-ekpo ọkụ nke ihe ọ whichụ whichụ na gburugburu ebe obibi mana ọ na-emebighị ihe ndị dị elu. Zitere na nkwakọ ngwaahịa onye nrụgharị.
Nlele Nke: CL-LW021
2020 NEW FASHION Cork Kofi Mug Biodegradable
Uzo abuo di: 16OZ & 12OZ
Nhọrọ abụọ: ika ihu na silk na nnyefe okpomọkụ
Nhọrọ mkpuchi atọ: mkpuchi PP ọhụrụ, mkpuchi ọdịnala, mkpuchi silicone
Igwe eji kọfị kọfị a bụ ezigbo echiche maka iji emegharị ihe ọ bụla na ihe ọ andụ travelụ ndị njem. Anyị anwaala ịchọta nguzozi zuru oke n'etiti uru na nkwado; site na iji ihe nchekwa dị mma ga-eguzosi ike na oge ị na-enyere aka belata mmetụta gburugburu ebe obibi site na ịdabere na iko kọfị ndị anaghị eji emegharị emegharị na-ejikarị na ụlọ ahịa. Iko anyị na akwa anyị dị n'ọtụtụ nhọrọ nke ụdị, agba, nha, na ọbụna ihe - yabụ ị ga - achọta nke ahụ zuru oke maka gị. Iko obula nwere ihe ndi puru iche na uru ha nwere.
Nke gara aga: Charmlite rọba kọfị Mug na ighaghachite idgha na Silicone Band Reusable Style 16oz
Osote: Charmlite Mpempe akwụkwọ eji acha pọpụpọ pọmpụ Ọkpụkpọ ọhụrụ na LED Funtion 16oz
Nnukwu kọfị kọfị
Mfe kọfị Espresso
Akara Mpempe Logo
Foto kọfị Foto
Nnukwu iko kọfị nke abụọ
16oz Single oyi akwa plasitc PP kọfị kọfị njem ...